Iván Aivazovski sy ny fitiavany ny ranomasina | Famoronana an-tserasera
Ranomasin-tsolika Iván Aivazovski
Misy mpanakanto na mpanao hosodoko sasany izay mahita amin'ny asany na ny fiainany kanto ho singa iraisana ary amin'izany milaza izy ireo fa mialoha mialoha manokana. Van Gogh sy ny tanamasoandro dia iray amin'ireo ohatra izay ahafahantsika mitodika haingana hahita fitadiavana sary hosodoko sasany raha tsy dia hiteny amin'ny maro.
Tamin'ny herinandro lasa dia tadidiko mpanao hosodoko hongroaly zava-misy izay nanana ny tarehimarika vehivavy ho lohahevitra miverimberina amin'ny ankamaroan'ny asany. Zavatra mitranga amin'i Iván Aivazovski ao aminy fanoloran-tena amin'ny marinas ary ireo velaran-tany izay asehon'ny ranomasina na ranomasina tsy manam-petra.
Aivazovski dia mpanao hosodoko Armeniana-Rosiana izay nandoko ny sasany tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX sangan'asa an-dranomasina avo lenta izay manome ny fahatsapana fa afaka milentika ao anaty onja izay efa hianjera amin'ny iray amin'ireo sisin'ireo sambo ireo izay niatrika ireo tafio-drivotra mahery.
Asa izay mampifangaro ny herin'ny ranomasina sy ny lanitra izany manaova simbiose tonga lafatra, izay ny manga no loko manjaka mankany amin'ny tonony maizina sy maivana kokoa, na hofenoina mavo izay manome ny loko maintso indrindra amin'ny fotoana sasany amin'ny andro izay ahitàn'ny hazavan'ny rano mafana sy milamina amin'ny ranomasina milamina ao anaty rano ao.
Mpanao hosodoko iray izay nahazo fankasitrahana ankapobeny noho ny fahaizany mamerina manao zavatra kalitao ambony ny herin'ny natiora sy ny ranomasina amin'ny tendrony, izay rehefa ny tafio-drivotra dia mamadika onjan-dranomasina mampidi-doza metatra metatra ny haavony.
Mpanao hosodoko tena tsara izay zarainay amin'ireto andalana ireto miaraka amin'ny sanganasa vitsivitsy asehony izany filan'ny ranomasina izany, ny fitoniany sy ny hasiany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ranomasin-tsolika Iván Aivazovski
Ny tranga zombie: famakafakana ny fivoaran'ny hatsarany ao anatin'ny 3 minitra